A Tract in Somali » Somali Christian Ministries
A Tract in Somali
Li kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow, oo anigu waan idin nasin doonaa
“Rabbigu waa u roon yahay kuwa isaga rajo ku suga iyo naftii isaga doondoontaba. Waxaa wanaagsan in badbaadinta Rabbiga rajo iyo aamusnaan lagu sugo.” (Baroorashadii Yeremyaah 3:25-26)
“Hoy, kuwiinna oomman oo dhammow, xagga biyaha kaalaya, xataa kii aan lacag haysanow, kaalaya, wax iibsada, oo wax cuna, kaalaya oo khamri iyo caano lacagla’aan iyo iibla’aan ku qaata. Haddaba bal maxaad lacag ugu bixisaan wax aan cunto ahayn? Oo wixii aad ku hawshooteenna maxaad ugu bixisaan wax aan idin dherjinayn? Bal aad ii maqla, oo waxa wanaagsan cuna, oo naftiinnuna ha iskaga istareexdo barwaaqo miidhan.
Dhegihiinna soo dhiga, oo ii kaalaya, i maqla oo naftiinnuna way noolaan doontaa, oo anna waxaan idinla dhigan doonaa axdi weligiis ah, kaasoo ah waxyaalahii naxariista lahaa oo la hubo ee aan Daa’uud u ballanqaaday.” (Ishacyaah 55:1-3)
“Laakiin in alla intii aqbashay, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, kuwaasu waa kuwii magiciisa rumaystay, oo aan ka dhalan dhiigga, ama doonistii jidhka, ama dad doonistiis, laakiin waxay ka dhasheen Ilaah.” (Yooxanaa 1:12-13)
“Sidii Muuse abeesadii kor ugu qaaday cidlada, sidaasoo kale Wiilka Aadanaha waa in kor loo qaado, in mid kastoo isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeed ah. Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Ilaah Wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaaddo isaga. 18Kii isaga rumaystaa ma xukumna, laakiinse kii aan isaga rumaysan, hore ayaa loo xukumay, maxaa yeelay, wuxuusan rumaysan magaca Wiilka Ilaah oo keliya oo dhashay.” (Yooxanaa 3:14-18)
“Ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow, oo anigu waan idin nasin doonaa. Harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta; waayo, waan qaboobahay, qalbigayguna waa hooseeyaa, oo naftiinna nasashaad u heli doontaan. Waayo, harqoodkaygu waa dhib yar yahay, oo rarkayguna waa fudud yahay.” (Matayos 11:28-30)
“Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii ereygayga maqla oo rumaysta kii i soo diray, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, xukunna geli maayo, laakiin dhimashadii ayuu ka soo gudbay oo nolosha u soo gudbay.” (Yooxanaa 5:24)
“Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Anigu waxaan ahay kibista nolosha. Kii ii yimaadaa ma gaajoon doono, kii i rumaystaana ma harraadi doono weligiis. Dhammaan wuxuu Aabbuhu i siiyo way ii iman doonaan, oo kii ii yimaadana ma eryi doono.” (Yooxanaa 6:35-37)
“Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii i rumaystaa, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah. Anigu waxaan ahay kibista nolosha.” (Yooxanaa 6:47-48)
“Anigu waxaan ahay kibista nool ee samada ka soo degtay. Haddii qof uun kibistan cuno, weligiis wuu noolaan doonaa. Oo kibistaan siin doonaa waa jidhkayga, nolosha dunida aawadeed.” (Yooxanaa 6:51)
“Oo kii jidhkayga cuna oo dhiiggayga cabba wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, oo maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa. Waayo, runtii jidhkaygu waa cunto, dhiiggayguna runtii waa wax la cabbo. 56Kii jidhkayga cuna oo dhiiggayga cabba wuu igu jiraa, anna waan ku jiraa isaga.” (Yooxanaa 6:54-56)
“Ciise ayaa ku yidhi, Anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha. Kii i rumaystaa, in kastoo uu dhinto, wuu noolaan doonaa. Kii kasta oo nool oo i rumaystaa weligii ma dhiman doono.” (Yooxanaa 11:25-26)
“Markaasaa Ciise wuxuu Toomas ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee.” (Yooxanaa 14:6)
“Bal eeg, albaabkaan taaganahay oo garaacayaa; haddaba haddii nin codkayga maqlo oo albaabka iga furo, waan u soo gelayaa, oo waan la cashayn, isna wuu ila cashayn.” (Muujintii 3:20)
“Dhamaan akhristayaashoow, rumay Rabigeena Ciise waad badbaadaysaaye, adiga iyo reerkaaga qaraabadaada. (Kolkaasay ku yidhaahdeen, Rumayso Rabbi Ciise, waadna badbaadi doontaa, adiga iyo dadka gurigaaguba.” (Falimaha Rasuullada 16:31)
“Ka dhigo Ciise Rabigaaga maanta, hadaad ku dhahda afrkaaga inuu Ciise yahay Rabigaaga, aadna ka qirato qalbigaaga in Ciise uu Ilaahay uu kasoo toosiyay dhimashada, waad badbaadaysaa. Maxaa yeelay, haddaad afka ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga, oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa, waayo, qalbiga wax baa laga rumaystaa xagga xaqnimada, afkana wax baa laga qirtaa xagga badbaadinta. Waayo, Qorniinku wuxuu leeyahay, Ku alla kii rumaysta isaga, ceeboobi maayo.” (Rooma 10:9-11)
Hadaba, go’aan ku qaado maanta inaad rumaysid farriintii Ciise, qalbigaaga sii rabigeena Ciise waxaad helaysaa nolol aan dhamaan, hadii aad rabtid inaad ducaysatid aadna tukato, iga daba dheh ducadan fudud:
“Rabiyo qaaliga ah, maanta waxaan kuugu imi magaca Rabigayga, Badbaadiyahayga Ciise, waxaan ku weydiisanayaa cafis, ii danbi dhaaf, dhamaan danbiyadii aan galay, isii nolol barako leh, magaca Rabigayga Ciise, rabiyow iga aqbal. Aaamiin.”
Hadii aad ku dacaysato ducadan kor ku xusan oo aadna qalbigaaga ka dhahdo kuna yaqiinaato waad badbaaday.
“Qalbigiinnu yuusan murugoon. Ilaah waad rumaysan tihiin, anigana i rumaysta. Guriga Aabbahay wuxuu leeyahay hoyaal badan. Haddaanay sidaas ahayn waan idiin sheegi lahaa, maxaa yeelay, waxaan u tegayaa inaan meel idiin sii diyaariyo. Oo haddaan tago oo meel idiin diyaariyo, mar dambe waan soo noqon doonaa, oo xaggaygaan idiin qaadan doonaa, in meeshaan joogo, idinkuna aad joogtaan.” (Yooxanaa 14:1-3)
© Somali Christian Ministries, 2014